जननेतासँग १४ वर्ष, १० महिना – Nepal Press
जननेतासँग १४ वर्ष, १० महिना
२०७८ जेठ ३ गते १०:४२
‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ स्थलमै केही साथीहरुले बाहिर कतै प्राप्त गरेको एउटा लामो पर्चा ल्याउनुभयो- पर्चाको शिर्षक नै ‘पथभ्रष्ट चन्द्र नेतृत्वदायी गुटके उपर गोलावारी करें !’ थियो । त्यसवेला चन्द्रप्रकाश (सीपी) मैनाली पार्टी महासचिव हुनुहुन्थ्यो र, उहाँ बहुचर्चित हुनुहुन्थ्यो । हिन्दीमा छापिएको उक्त पर्चाले हामीलाई अत्यन्त आक्रोशित वनायो । पार्टी स्थापना गर्ने दिनमै रामचन्द्र-अशेश्वरहरूको उग्रवामपन्थी चिन्तन र दक्षिणपन्थी चिन्तनको सामना गर्नुपर्ने भयो । त्यसको प्रतिवादमा मदनले सकृयताका साथ भूमिका खेल्नुभयो । हामीले केही समयभित्रै यी दुवै विचारलाई निस्प्रभावी वनायौं ।
विभिन्न वामपन्थी समूहहरूलाई सके एउटै पार्टीमा, नसके पनि एउटै मोर्चामा ल्याउनैपर्छ भन्ने मान्यता थियो मदनको । सिद्धान्त, कार्यक्रम र अन्य कतिपय विषयहरूमा एउटै धारणा र मान्यता भएका तर कार्यनीतिक प्रश्नहरूमा भने एक ठाउँमा नआइसकेका वाम समूहलाई मित्रवत वहस, छलफल गर्दै नजिक रहने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि थियो- मदनको ।
मदन महासचिव जस्तो गरिमामय र जिम्मेवार पदमा पुग्ने कुरा कसरी सम्भव भयो ? त्यसवेला वहाँ केवल ३९ वर्षको मात्र हुनुहुन्थ्यो । कतिपय मानिसले, यहाँसम्म कि अहिले एमाले भित्रकै कतिपयले समेत मदनको यो विकासक्रमलाई राम्ररी वुझ्नसकेका छन् जस्तो लाग्दैन । मदनको व्यक्तित्व र भूमिकाका सम्वन्धमा आ-आफ्नै धारणा राख्नेहरूको काफी संख्या छ ।
मदन कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रको व्यक्ति मात्र नभएर, विचार-प्रवृत्तिको अगुवा प्रतिनिधि र सशक्त आन्दोलनको वाहक पनि रहनु भयो ।
पूर्वीय साहित्य, दर्शन तथा मार्क्सवादी साहित्यको गहन एव समीक्षात्मक अध्ययनका साथै तिनको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धताले विकसित भएको व्यक्तित्व थियो- मदन भण्डारीको । नेकपा (एमाले)को महासचिवको जिम्मेवारी लिने स्थानसम्म आइपुग्दाको यात्राक्रमलाई फर्केर हेर्दा मैले वहाँमा रहेको त्यो क्षमतालाई अत्यन्त वेजोड मानेको छु ।
हाइकमाण्डसँग परामर्श नगरी वा दिइएको निर्देशन विपरित सम्झौताका लागि लहसिएको आरोप लाग्यो । मदन पनि राधाकृष्णसँग आक्रोशित नै बन्नुभयो । यही ‘सेण्टिमेण्ट’मा चैत्र २६ गतेको ऐतिहासिक र संयुक्त विजयसभामा राधाकृष्णलाई सभास्थलबाट बाहिर ल्याइयो, बाेल्न दिइएन । अहिले मलाई एउटा प्रश्नले सँधै लखेटिरहन्छ- त्यसवेला मदन सहितका हामीहरूले राधाकृष्णप्रति विवेक पुर्‍याउन सकेका थियौं कि थिएनौं ? मदन आफैं यसबेला रहनुभएको भए यो प्रशंगका बारेमा कसरी सोच्नुहुन्थ्यो होला ?
तर अचम्म ! मदनलाई हजारौंको त्यो उपस्थितिमा बाेल्न पाउनु भएन । त्यहाँ मनमोहनले बाेल्नुभो, माधव, झलनाथ र सिपीसमेतले बाेल्नुभो तर मदनले बाेल्न पाउनु भएन । मदनले बाेल्नुपर्छ भनेर मैदानमा वस्नेहरू कराइरहेका थिए, तर पनि उहाँले बाेल्ने अवसर जुरेन । यसमा कसको योजना र कुन मनोविज्ञानले काम गरेको थियो कुन्नी ? उद्घाटनसभा सकेर मदन र म सँगै फर्केका थियौं । वहाँले आफू चढ्नुभएकै गाडीमा मलाई पनि बस्न आग्रह गर्नुभयो । उद्घाटन सभामा आफूलाई वोल्न नदिएको वारेमा मुखै खोलेर त केही बोल्नु भएन तर पार्टीमा भित्रभित्रै मौलाउन खोज्दैगरेको अस्वस्थ्यताका वारेमा केही संकेत भने गर्नुभयो । यी सबै कुराका वावजूद पनि महाधिवेशनको वन्द सत्रमा वहाँले प्रस्तुत गर्नु भएका विचार, योजना र नेतृत्वको शानदार विजय भएको थियो ।
गणेशमानजीहरुसित त्यसवीच पटकपटक भएका भेटघाटवारे जानकारी गराउँदै आफू काठमाडाैं बाहिर रहेका वेला मलाई सम्पर्क विन्दूका रूपमा रहन निर्देशन दिनुभयो । त्यस प्रयोजनका लागि मदनले मेरो कोठाको ल्याण्डलाईन टेलिफोन नम्वर गणेशमान जीलाई दिएको र कुनै पनि वेला वहाँहरूले सम्पर्क गरेपछि आफूलाई तुरून्त सूचना गर्न विभिन्न मितिमा आफू पुग्ने ठाउँ र सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिवारे विवरण सहितको एउटा टिपोट दिनुभएको थियो । मैले त्यसवेला मदनले भन्नु भएका सबै विषयलाई गम्भीरताका साथ सुनिरहें, आवश्यक केही केही कुराहरू नोट गरें र आफूलाई लागेका केही विषयका वारेमा जिज्ञासा राखेँको थिए ।
मदनको निर्देशन थियो- यी धेरै गम्भीर र दूरगामी महत्व राख्ने विषय हुन्, गोपनियता वचाउनु होला, मैले दिएको मेरो कार्यक्रमको चीट पनि सुरक्षित राख्नुहोला । हामीबीच कुराकानी सकिनासाथ मदन कास्की जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटनका लागि हिड्ने तयारीमा लाग्नुभयो । म एकछिनपछि मदनलाई शुभ-यात्रा भन्दै आफ्नो ज्ञानेश्वरको कोठातिर लागे ।
(ईश्वर पोखरेलको अप्रकाशित पुस्तक ‘जननेता मदन भण्डारी’बाट साभार)
प्रकाशित: २०७८ जेठ ३ गते १०:४२